Caqabadaha ku gadaaman doorashada lixaad ee dhawaan dalka Ethiopia ka dhacaysa? – Beegsonews-Wararka maanta
Home MAQAALO Caqabadaha ku gadaaman doorashada lixaad ee dhawaan dalka Ethiopia ka dhacaysa?
Waxaa qoray: Zakaria Ahmed – oo falanqeeya arrimaha Geeska.
Jabhadiihii la magac baxay dib-u-xoraynta dalka Ethiopia, sidda jabhadii Soomaalida ee ONLF, jabhadii Amxaarada GInbot-7, jabhadii Oramada ee OLF ayaa dawladda dhaxe kala kulantay caqabado badan. Halka ururka ONLF uu ku eedeeyay xisbiga ay dawlada dhaxe iyo maamul-gobaleedyadu ku midaysan yihiin ee PP kaas oo hore loo odhan jiray EPRDF inay si qaldan u maamulayaan doorashada.
Jabhadii Amxaarada ee Ginbot-7 oo immika la magac baxday xisbiga EZEMA ayaa iyana si wayn uga biyo – diidan inay ka qayb-galaan doorashada, iyaga oo sheegay in xisbiga talada haya ee uu gaadh – wadeenka ka yahay Abiy Axmed uu doonayo innuu kuraasta heer deegaan iyo heer Federaal si qaldan u maamusho.
Xisbigii deeggaanka tigreega ee TPLF oo awood wayn kulaa xisbigii magaca laga bedalay ee EPRDF ayaa iyaguna aad uga biyo diidan doorashada. Mucaaridka deegaanka Tigreega ayaa iyaguna dadka deegaankooda ku dhiiri galinaya in xisbiga PP uu duulaan ku yahay deegaankooda – taas oo keentay in xisbiga talada haya uu rajo xun ka muujiyo innuu kuraas fiican ka helo deegaankaasi.
Deegaanada Shucuubta Koonfureed, Gambeelada, Canfarta, Herarida iyo Sidhaamada oo iyagu ah kilalkii ugu dambeeyay ee kusoo biira kilalada Ethiopia, Abiy Axmed na abaal ugu haya innuu kilal gaara ka dhigay ayaa taageero buuxda u haya Xisbigiisa. Abiy ayaa aad ugu han wayn innuu xisbiga PP kuraasta heer deegaan iyo heer Federaal ku guulaysto kilaladaas, inkastoo deegaanka Canfarta mucaaroodkooda dawlada Ethiopia ku eedaysay inay fekradihii TPLF ay wali aaminsan yihiin.
Dagaalada ka socda Gobalka Wollo ee deegaanka Amxaarada, balse dadka degan badankoodu Oramo yihiin ayaa iyana caqabad wayn ku ah doorashada. Amxaarada gobalkaa dagan ayaa doonaya maadaama gobalku deegaankooda ka tirsan yahay inay kuraasta ugu badan helaan. Ujeedooyinkii TPLF bay kamid tahay in deegaankasta qayb kamida la hoos geeyay deegaan kale.
Abiy Axmed iyo xisbigiisa PP ayaa deddaalo hor leh ugu jira siddii ay ugu guulaysan lahaayeen kuraasta heer deegaan iyo heer Federal ee tobanka Kilal ee Ethiopia. U jeedada ugu wayn ee uu xisbiga PP u doonayo innuu kuraasta heer deegaan ku guulaysto ayaa ah innuu taageero buuxda uga helo xukuumadiisa.
Previous articleMareykanka ayaa soo Dhoweeyay Tilaabadii ay qaadeen Madaxweyne Farmaajo iyo Golaha shacabka
Next articleAmnesty International oo ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyada Israa’iil ku sameysay Falastiiniyiinta